Ibsa Gaddaa ABO:Addi Bilisummaa Oromo boqochuu Professor Mahadii Haamiid – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIbsa Gaddaa ABO:Addi Bilisummaa Oromo boqochuu Professor Mahadii Haamiid
Ibsa Gaddaa ABO:Addi Bilisummaa Oromo boqochuu Professor Mahadii Haamiid
Addi Bilisummaa Oromo boqochuu Professor Mahadii Haamiid Muudee hin eegamin oggaa dhagahe gadda guddaa lafee nama seenutu itti dhaga’ame.
Profesar Mahadii Haamid wayta Oromoo tahanii mul’achuu fi Afaan Oromoo dubbachuu fi barreessuun ulfaataa ture keessa nama gaazexaa Bariisaa hundeessee fi Abbaa Bariisaa jedhamee beekame dha. Afaan Oromoo gaazexaan maxxanfamee akka bahu taasisuu keessatti sabboontota Oromoo warra duraa keessaa tokko turan. Kana malees kuusaa jechootaa fi hiikkaa (Dictionary) afaan Oromoo fi software baasuun dagaagina hanga du’aan addunyaa kana irraa godaananitti dadhabe osoo hin jenne dagaaginaAfaan Oromoof hojjachaa kan turan sabboonaa Oromoo jabaa turan.
Seenaan Oromoo akka ifa bahu gochuuf qoodni gumaachan ol aanaa dha. Nama beekaa, hubataa fi qaroo hojii mul’ataa fi bu’a qabeessa uummata Oromoof hojjete, uummaticha biratti jaalala guddaa qabu tahuu ABOn itti dhiheenyaan beeka. Professor Mahadii Haamiid umriin isaanii barnootaaf akka gaheen Harargee Bahaa, magaalaa Cirootti mana barnootaa Ciroo seenan. Kutaa 2ffaa magaalaa Hararitti osoo barataa jiranii barnootaan jabaa tahanii waan argamaniif Finfinnee mana barnootaa Baa’ida-maariyam jedhamutti dabarfaman.
Kutaa 2ffaa Baa’ida-maariyamitti xumuranii Yuniversitii yeroos Yuniversitii Haayila Sillaasee jedhamee waamamu,YUNIVERSITII Finfinnee har’aa seenuun digrii jalqabaan eebbifaman. Mana barnootaa keessa wayta turanitti sochii barattoota Oromoo keessatti qooda fudhachuun miidhaa ummata Oromoo irra gahaa ture mormaa akka turanii fi sirna cunqursaa irratti qabsaawuuf kan murteeffatanis ijoollummaa isaanii irraa jalqabanii akka ta’e duubbeen seenaa isaa ni ibsa.
Addi Bilisummaa Oromoo professor Mahadi Haamid Muude addunyaa kana irraa du’aan darbuu gadda cimaa itti dhaga’ame irra deebi’ee ibsachaa dirqama qabsoo isaan bahaa turan daran jabeessuu fi xumura itti gochuuf kanneen lubbuun jirru qooda nurraa eegamu akka gumaachinu waamicha dabarsa. Dhuma irratti Professor Mahadi Haamid biyyoon sitti haa salphatu, nagaan boqodhu jechaa maatii fi firoottan isaaniif jajjabina hawwina.
Adda Bilisummaa Oromoo(ABO)
SEENAA GABAABDUU MAHDII HAAMID MUUDEE (1950-2021)